ယနေ့ ကမ္ဘာကြီး ကို လွှမ်းမိုးသွားတဲ့ ဟီးရိုးများ - Pyit Time Htaung
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီး ကို လွှမ်းမိုးသွားတဲ့ ဟီးရိုးများ
အရင်တုန်းက မြန်မာလို့ google မှာ ရှာလိုက်ရင် ဘင်တွေ အကြောင်းဘဲ ‌ထင်းကနဲပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးက ဘင်ပြဿနာနဲ့ဘဲ တွဲနား လည်တဲ့ အနေအထားပေါ့။
ဘင်တွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့သနားမှုကို မျက်ရည်နဲ့ချူသွားခဲ့တယ်။သနားခြင်းဆိုတာ ရည်ရှည်တည်ဆောက်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ အမြဲ update လုပ်နေရတယ်။ ခုဆို ပြည်ပ က လူတွေတောင် မေ့နေကြပြီ။
ဒါပေမယ့်ခု မြန်မာပြည်ရဲ့ G-Z တွေ က တကမ္ဘာလုံးက G-z တွေကို အကောင်းဆုံး လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်။ တခြားနိုင်ငံက G-Z တွေ XY တွေ ပါ အံ့ဩအားကျ သွားကြတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆန္ဒပြပွဲတွေက သူတို့အတွက် ကိုးရား ဇတ်လမ်းတွဲထက် ပိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတယ်။ တလကျော်အကြာအထိ တောင့်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မြန်မာ့ သပိတ်ကိုလည်း လက်ဖျားခါ ချီးကျူးကြတယ်။
ဆန္ဒပြသူတိုင်း လက်မောင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ်၊သွေးအမျိုးအစား ရေးထားပြီး အသေခံဆန္ဒပြနေတာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့လူငယ်တွေရဲ့သမိုင်းမှာ အရမ်း ဆန်းသစ်တဲ့အမြင်ကို ဖြစ်စေတယ်။
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက Gen.XY နဲ့ Z တွေက သူတို့ မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ သူတို့ ဖုန်းတွေထဲက တွစ်တွေ ပွတ်ကြတယ်။ သူတို့ စိတ်ထဲ အဲ့တာက အောက်ဖဲချပ်ကိုပွတ်ပြီး တဖြေးဖြေးကြည့်ရတာထက် ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီနေ့ ဆန္ဒ ပြ မှ ပြနိုင်သေး ရဲ့ လား?
စစ်တပ်က ရက်စက်လွန်းလို့ အရှုံးပေး လိုက်ပြီလား?
ဒီနေ့ရော စစ်တပ်ဖြိုခွင်း မှုကို ဘယ်လို အကြမ်းမဖက် တဲ့ နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြ သလဲ?
စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ကြောင့် ဘယ်လောက် သေခဲ့ လည်း။?
စတဲ့ တထိတ်ထိတ်စိတ်တွေ နဲ့ ဖုန်းကို ပွတ်ပြီး။သူတို့ ရဲ့ တနေ့တာကို မျက်နှာသစ် တဲ့ ဓလေ့ ဖြစ်လာ နေပါပြီ။ သူတို့ ဓလေ့လိုဖြစ်လာတော့ TV တွေကလည်း မြန်မာအကြောင်း တနေ့ သုံးခါ လောက်တင်ပေး လာကြပါတယ်။
မနေ့ကဆို CNNလိုကမ္ဘာကျော်သတင်းဌာနကြီးက ခဏ ခဏတောင်တင်နေသေး တယ်။ ပြောချင်တာက (အကယ်၍သာ မြန်မာပြည်သားတယောက် ပြည်ပမှာ ရှိနေပါရင်၊ သူဟာ မြန်မာတယောက်လို့ ဘေးက လူတယောက်ယောက်က သိသွားပါရင် ၊သူ့ရဲ့လက်ကို လာဆွဲ၊နူတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ၊ဒီနေ့ရော မြန်မာပြည်က လူတွေ တောင့်ခံနိုင်တုန်းဘဲလား မေး လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် တောင့်ခံနိုင်တယ်လို့ ဖြေခဲ့ရင် အဲ့အတွက် သူဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ထပ်တူရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါလိမ့်မယ်)
ခု သေဆုံးသူတွေ၊အဖမ်းခံရသူတွေ၊ဒဏ်ရာ ရသူတွေ၊ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်နေသူတွေ အား လုံးကို ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုပါရစေ။
ခု .ခင်ဗျားတို့ ဟာ.မြန်မာပြည်ရဲ့ ကြယ် အဆင့် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ လူငယ် လူကြီးတွေ ရဲ့ ကြယ်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့တွေ အတွက်၊ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးတဲ့ အထင်ကြီးလေး စားအားကျလောက်တဲ့ ဟီးရိုးလိုဂို ဖြစ်နေ ပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီး တောင့်ထားကြပါ။ရှင်သန်ကြပါ။အရှုံးမရှိဘဲအဆုံးအထိ ဆက်သွား ကြပါစို့။
Previous post CNN က နံမည်ကြီးစစ်သတင်းထောက် နဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ အင်တာဗျူးကောက်နှုတ်ချက် ( အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုဖိုင် )
Next post မြန်မာ့အရေး ဘက်မလိုက်ဘဲ အားလုံးနဲ့ ထိတွေ့သွားမယ်လို့ပြောလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယီ